Posted by ကို Tranquillus | 24 ပင်လယ်, 2018 | အွန်လိုင်းသင်တန်း
အသစ်ကသင်ကြားမှုနည်းစနစ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့သင်ခန်းအတိုင်းလိုက်နာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဈေးပေါပေါမိမိတို့၏ CV ကိုမြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူအပေါငျးတို့၏လက်လှမ်းမမီအတွင်းယခုဖြစ်ပါတယ်။ OpenClassRoom ခြောစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်ရှားပါးအရည်အသွေးကိုများစွာသောလူတို့ပါဝင်သည်။
ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အတိုကောက်ရှင်းလင်းစွာအကွာအဝေးပညာရေးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ဦးမှရှင်းပြဖို့မကြာခဏခက်ခဲသည်။ သို့သျောလညျးဒီထူးဆန်းတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းမရှိဘဲ OpenClassRoom အပေါ်မှတ်ပုံတင်ရန်မဟုတ်ပါဘူး။
( "Mouk-" လို့အသံထွက်ပါ) သင်ခန်းတကယ်အင်္ဂလိပ်လို "ကြီးမားတဲ့အွန်လိုင်းပွင့်လင်းသင်တန်းများ" ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်Molière၏ဘာသာစကားကိုထဲမှာ, အမည် "အွန်လိုင်းသင်တန်းအားလုံးစေရန်ပွင့်လင်း" (သို့မဟုတ် Float) ကဘာသာပြန်ထားပါသည်။
ဒါဟာအမှန်တကယ် web ပေါ်မှာသာသင်တန်းများဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်? သူတို့ဟာမကြာခဏသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပြီး, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ပြုလုပ်သည် Bac +5အထိနိုင်ငံတော်ကအသိအမှတ်ပြုဒီပလိုမာရဖို့ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပညာရေး၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောနှင့်အတူ, သင်ခန်းဖြစ်သွားတာသတိထားနှုန်းထားများ။ သင်တန်းများ၏အများစုသည်အခမဲ့ဒါမှမဟုတ်ကင်းလွတ်သိအောက်မှာကျိုးနွံခု၏လဲလှယ်၌ရှိကြ၏။
အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်သည်သူ၏ CV ကိုမြှင့်တင်ရန်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်
ဒါဟာသင်ခန်းအစစ်အမှန်ပညာရေးတော်လှန်ရေးဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, မည်သူမဆိုအိမျကနေအိမ်ပြန်အမျိုးမျိုးသောရှိပြီးသားပလက်ဖောင်းမှကျေးဇူးတင်စကားဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ မည်သည့်အချိန်ဇယားသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲအကြောင်းမဲ့ခံရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခြင်းစဉ်ဤအခမဲ့ဈေးပေါပေါသို့မဟုတ်ပင်အခွင့်အလမ်းအလွန်ထူးခြားတဲ့လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပို. ပို. အလုပ်ရှင်အသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးကသင်ကြားမှုနည်းလမ်း
ဒါဟာနေဆဲပြင်သစ်အားလုံးကိုအလုပ်ရှင်များမှအကွာအဝေးသင်ယူမှု၏ဤအမျိုးအစားများ၏တရားဝင်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့သွားကြဖို့အတော်လေးတစ်လမ်းဖြစ်သော်လည်းအချို့သင်ခန်း၏လက်မှတ်လုံးဝသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြားခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည် နှင့်အခြား၏။ ဤရွေ့ကားအဆုံးလက်မှတ်များအမှန်တကယ်အထူးသဖြင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာရသည်။
ဒါဟာပလက်ဖောင်းကယ့်ကိုခေတ်စားလာခဲ့သည်နှောင်းပိုင်းတွင် 2015 ပါပဲ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ Francois Hollande, Mathieu Nebra, ထို site ရဲ့တည်ထောင်သူလက်အောက်တွင်, ပြင်သစ်အားလုံးကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများဖို့ "ပရီမီယံတစ်ကိုယ်တော်" subscription ကိုပူဇော်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကတိုင်းပြည်အတွင်းအများဆုံးနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်လူကြိုက်များ float များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် OpenClassRoom propelled သောအလုပ်လက်မဲ့သနားတျောမူသောဆုကျေးဇူးတော်ကားဖြစ်ပါတယ်။
လူအနည်းငယ်သတိထားမိသော်လည်း, Openclassroom ယခင်ကအခြားအမည်အောက်တွင်လူသိများခဲ့သည်။ ဒါဟာအဲဒီမှာနှစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်နေဆဲ "သုညဆိုက်ကို" ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာက Mathieu Nebra သူ့ဟာသူ posted ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအရည်ရွယ်ချက်မှာကွဲပြားခြားနားသောပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
နေ့တိုင်းအသစ်အသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့ posted ကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းများနောက်လိုက်ဖို့ sign up ကို။ ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအတော်လေးအရေးတကြီးနောက်ထပ်သင်ကြားမှုအသစ်တစ်ခုနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဤစနစ်ဖွံ့ဖြိုးစဉ်းစားပါဖြစ်လာသည်။ E-သင်ယူမှုအတွက်သင်ယူမှုကိုလူသိများနေစဉ်, OpenClassRoom professionalized နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိကြအနည်းငယ်သည်ဗေဟမုတ်ခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်သာဖြစ်လာသည်။
ဖတ်ရန် Tuto.com: ကုန်သွယ်ရေးဒူ Net က Make ရန်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လူမှုသင်ယူအတွက်သင်တန်းများ။
သုညအဘယ်သူ၏အဓိကဝိသေသအပေါင်းတို့အားလက်လှမ်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်အွန်လိုင်းမှလေ့ကျင့်ရေးပလက်ဖောင်းသို့လှည့်ထားသည်ဝက်ဘ်ဆိုက် OpenClassRoom ဖြစ်လာခြင်းဖြင့်။ အဆိုပါသင်တန်းကို catalog ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအလွန်ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။
အတော်များများကသင်တန်းများလစဉ်လတိုင်းကဆက်ပြောသည်နေကြတယ်, အချို့တို့ကိုပင်ဒီပလိုမာဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ယခုအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ဒီဇိုင်းထံမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရန်, ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်ဖွဲ့စည်းထံမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်ခန်းကိုလိုက်နာချင်ပေမယ့်သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြသလော ဒါဟာတခါတရံသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစီအစဉ်များအားအလွန်သင့်တော်ပါတယ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရွေးဖို့လှည်နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းစွာမြင်ခြင်းနှင့် OpenClassRoom အပေါ်ရွေးချယ်ဖို့ပူဇော်ရာကိုသိရန်ဒီလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။
အခမဲ့ (အခမဲ့), ပရီမီယံတစ်ကိုယ်တော် (20 € / လ) နှင့်ပရီမီယံ Plus အား (300 € / လ): လစဉ်စာရင်းပေးသွင်းထားမှုများသုံးမျိုးအွန်လိုင်းသင်တန်းများ၏ platform ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ပတ်ကိုသာ5ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုသူကန့်သတ်ချိန် မှစ. အဆိုပါအခမဲ့အထုပ်သဘာဝကျကျလျော့နည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံမြင့်မားလေလံများအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီပလက်ဖောင်းစမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဤစာရင်းပေးသွင်းခြင်းသို့သျောလညျးစုံလင်သည်။
ဒါဟာမဟုတ်ဘဲသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အလှဆင်ရန်လိမ့်မည်ဟုသင်တန်းပြီးစီး၏တန်ဖိုးရှိသောလက်မှတ်များရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်အရာကိုတစ်ကိုယ်တော်ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းဖို့ကိုဖွင့်သည်သင်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအထုပ်တစ်လလျှင်သာ 20 €ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြပါလျှင်ပင်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဤကိစ္စတွင်၌ရှိကြ၏လျှင်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှတ်ပုံတင်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။ ဒါဟာသင်ဘာမျှမကုန်ကျမည်!
တကယ်ကသူ့ CV ကိုတိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်သို့သော်ပရီမီယံ Plus အားကြေးပေးသွင်းဖို့ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်
သတိပြုသင့်သည်မှာစျေးအမြင့်ဆုံး package (သာမာန် Premium Plus) မှသာဒီပလိုမာသင်တန်းများကိုတက်ရောက်နိုင်သည်။ သင်၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအမှန်တကယ်ကြွယ်ဝစေရန်သင်စီစဉ်ထားပါက၊ လစဉ်ကြေးယူရို ၃၀၀ သို့သင်လုံးဝစာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်သင်တန်းပေါ် မူတည်၍ သင်ပြည်နယ်မှအသိအမှတ်ပြုထားသောစစ်မှန်သောဒီပလိုမာများရရှိရန်သင်အခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်။ OpenClassRoom တွင်၊ Bac + 300 နှင့် Bac +2အကြားရှိသည်။
ပလက်ဖောင်းကကမ်းလှမ်းနှစ်ခုသည်အခြားအပေးအယူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာမြင့်မားတဲ့ပုံရသည်သော်လည်း, ပရီမီယံစီးပွားရေးအရအမြဲပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အချို့အထူးပြုကျောင်းများ၏ကျူရှင်စရိတ် OpenClassRoom တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဒီပလိုမာသင်တန်းများထက်လျော့နည်းတတ်နိုင်ကြသည်။
Openclassroom အပေါ်တစ်ဦးသင်ခန်းယူပြီးလျင်မြန်စွာသည်သူ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မြှင့်တင်ရန် ဇူလိုင်လ 19th, 2018Tranquillus
အောက်ပါသင်၏စိတ်ဓာတ်ကို Elephorm Video Training ဖြင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ
Tuto.com: ကုန်သွယ်ရေးဒူ Net က Make ရန်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လူမှုသင်ယူအတွက်သင်တန်းများ။